Aqoonta Looga Baahan Yahay Caruurta Bukaanka qaba Sonkorowga - Wadahadalka Sonkorowga-Sinocare
Aqoonta Looga Baahan Yahay Caruurta Bukaanka qaba Sonkorowga
Waqtiga: 2020-04-10 Hits: 153
Caruurta bukaanka sokorowga qaba waa inay bartaan aqoonta aasaasiga ah ee soo socota inta badan:
1. Sonkorowgu ma ahan mid kumeelgaar ah oo aan la dawayn karin. Ha rumeynin dacaayadda dawooyinka qarsoon ee abtirsiinta, hay'ad caafimaad oo caalami ah oo aad u horumarsan iyo alaabooyin caafimaad oo dahsoon. Fadlan tan maskaxda ku hay!
2. Insulinta ma aha wax balwad ah. Haddii insulinta uu qoro dhakhtar sababta oo ah heerka gulukooska dhiigga ee hore ayaa aad u sarreeya, waa inaadan necbayn dhakhtarkan, maxaa yeelay sunta hyperglycemic sunta waxaa lagu yareyn karaa maamulka waqtigiisa insulin. Haddii insulinta la siiyo wakhti ku habboon oo suurtagal ah, waa laga noqon karaa. Si kastaba ha noqotee, ka bixitaanka insulintu ma muujineyso in sonkorowga la bogsiiyey, laakiin waxay muujineysaa inaad caafimaad qabtid muddadan.
Haddii daawooyinka qaar ay dhakhaatiirtu u qoraan waalidiintaada, kaliya maahan in lagu siiyo si waafaqsan amarka caafimaad, laakiin sidoo kale saameyntooda waa in lagu ogaadaa iyadoo si dhow loola socdo gulukooska dhiigga. Haddii heerka gulukoosta dhiiggu aanu gaarin qiimaha caadiga ah, waa inaad la xiriirtaa waqtiga dhakhaatiirta, maxaa yeelay dhakhaatiirtu ma ahan ilaah, marmarka qaarkoodna ma heli karaan daawooyin waxtar u leh daaweynta cudurka. Haddii aad had iyo jeer la xiriirto dhakhaatiirta, dhakhaatiirta ayaa laga caawin karaa inay sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah xal ugu helaan.
3. Marka gulukoosta dhiiggu si fiican loo xakameeyo, waad qaadan kartaa wax cunto ah, laakiin waa inaad wali xukumaan qadarka qaadashada.
4. Jimicsigu waa hab wanaagsan oo lagu xakameeyo gulukoosta dhiigga. Soosaarida jimicsi wanaagsan ayaa si fiican u wanaajin kara xasilloonida jirka, waxayna gacan ka geysan kartaa xakameynta gulukooska dhiigga. Ha ka xanaaqin waxa jimicsi la qaadayo, oo kaliya samee jimicsi.
5. Iyada oo la marayo kormeerka gulukoosta dhiigga, heerka gulukooska dhiigga lama yareyn karo, laakiin waxaad go'aansan kartaa haddii dawooyinka hadda jira iyo cunnadu yihiin kuwo macquul ah.
Si looga caawiyo waalidiinta qaba cudurka macaanku inay si wanaagsan u maareeyaan gulukooska dhiigga, carruurtooduna waxay sameyn karaan arrimaha soo socda:
1. Soo iibso buug sonkorow ama u qor waalidiintaada buug joornaal. Buugag badan oo sonkorow ayaa laga heli karaa internetka, sida kuwa ay qoreen Prof. Yang Wenying, Prof. Xiang Hongding iyo Prof. Wang Jianhua. Buugaagtan way fududahay in la fahmo oo la taaban karo; waxayna ka caawin karaan waalidiintaada inay ogaadaan aqoonta aasaasiga ah ee ku saabsan xakameynta gulukooska dhiigga. Ama waad iska diiwaan gelin kartaa qayb ka mid ah aqoonta noocaas ah waalidiintaada.
2. Ka caawi waalidiintaada inay yeeshaan dhaqan jimicsi wanaagsan adiga oo siiya qalab jimicsi, sida kabaha isboortiga, boorarka badminton, jaakadaha isboorti / surwaalka iyo fiidooyinka miisiska miiska.
3. Haddii waalidkaa aysan jeclayn xayawaanka rabaayadda ah, waxaad siin kartaa eey waalidiintaada. Markii waalidkaa ay arooraan subaxdii eeyga, waxay si fiican u dhisi karaan jimicsi wanaagsan, isla markaana qoomammadaada ee aadan awoodin inaad raacdid iyaga waa la xallin doonaa, maxaa yeelay waxay leeyihiin saaxiib gaar ah oo ka badan ama ka yar (dareen murugo leh).
4. U soo iibso waalidkaaga cabirka mitirka gulukoosta dhiigga iyo mitirka cadaadiska dhiigga. Iyada oo loo adeegsanayo mitirka gulukoosta dhiigga, waalidiintaada waxaa laga caawiyaa barashada heerka gulukooska dhiigga iyo ogaanshaha in daawooyinka si sax ah loo isticmaalo iyo in cunnadu sax tahay. Waa inaad sidoo kale u soo iibsataa waalidkaaga cabirka dhiigga, sababtoo ah dhiig karka iyo dhiig karka waa cudurro walaalo ah waana muhiim in lala socdo cadaadiska dhiigga iyo gulukooska dhiigga. Maaddaama aysan qaali ahayn, waad ka iibsan kartaa adigoo iska ilaaliyaya qolka cuntada lagu cabo.
In ka badan 4-ta qodob ayaa ku lug leh walxaha dhabta ah ee ay tahay inaad u soo iibiso waalidkaa. Ha u eegin waxa alaabada caafimaadku yareyn karaan heerka gulukooska dhiigga, maxaa yeelay heerka sonkorta dhiigga looma dhimi karo shey kasta oo caafimaad; hadaad rumeyso iyaga, iyagu dhab ahaantii istaahila mushaharkaaga. Waxyaabaha ka sarreeya 4 walxaha ayaa aad uga waxtar badan waxyaabaha caafimaadka.
5. Haddii aad guriga joogtid, waad ugubnaan kartaa waaliddiintaada safar dheeri ah cashada kadib. Haddii aadan guriga joogin, waa inaad wacdaa intaas ka badan. Gaar ahaan marka sonkorowga la garto sida xaqiiqada ah, waalidiintaadu way nugul yihiin, dhiirigelintaada maskaxduna waa lagama maarmaan, sida ay adiga xannaaneeyeen markii aad xannuunsanayd wakhtigaas. Waxa ka duwan, markii aad bukootay, waalidkaa ayaa ku raacay maalintii oo dhan iyo habeenkii; si kastaba ha noqotee, marka ay hadda xanuunsan yihiin, ma raacin kartid (dareen gaar ah oo murugo leh).
6. Haddii waalidiintaada aysan isuduweynin, waa inaadan waligaa wacyigelin ama xitaa canaanan. Markii waalidiintaada aysan iskaashi ka sameynin xakameynta gulukoosta dhiigga, inta badan, run ahaantii maahan kuwo diidan, laakiin waxay leeyihiin nabarro aad u fara badan, sida bixinta lacag aad u badan, cabsi cabsi-ka-dhalasho iyo xaalad xun. Xilligan la joogo, waa inaad ka fakartaa mowqifkooda waxbadan oo kusaabsan fikradooda dhabta ah.
Bogga Hore: Seddex Sababood oo Suurta gal ah in la Soomo Baaritaanka Glucose Plasma> 7 mmol / L
Bogga Dambe: Toddobada Tilmaamood ee ugu habboon ee loo baahan yahay in la sameeyo ka dib marka uu sonkorowgu bukoodo